झोले सल्लाहकारका कारण रासस र गोरखापत्रमा आतंक ! – YesKathmandu.com
सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम रासस र गोरखापत्रमा छाँयामन्त्रीको आतंक मच्चिएको छ । संविधान संशोधनको विरोधमा हिजो एमाले सहितका नौ दलले विरोधसभा तथा शक्ति प्रर्दशनीको आयोजना गरेका थिए । सोही समाचार प्रकाशन गरेवापत राससका पत्रकार प्रकाश सिलवाललाई छाँयामन्त्री राजेन्द्र किँरातीले वारम्वार ‘टर्चर’ दिएका छन ।
उनले नारा किन लेखिस भन्दै अनावश्यक टर्चर दिएको राससले स्रोतले जनाएको छ । साथै लेखिएको समाचार हटाउन समेत किराँतीले राससका सम्पादकहरुलाई दबाब दिएका थिए ।
कार्यक्रमस्थलमै पुगी ‘विपक्षीको जनप्रर्दशनमा जे देखियो’ शिर्षकमा सिलवालले समाचार प्रकाशन गरेका थिए । उनको समाचारमा त्यहाँ लगाइएका नारा पनि समावेश थिए । त्यहाँ लगाइएका नाराका विषयमा समाचार लेख्दा उनलाई र राससलाई किराँतीले अनाबश्यक रुपमा दबाब दिएका हुन ।
अन्य सम्पूर्ण दैनिक पत्रिकाले महत्वको साथ विपक्षी दलको शक्ति प्रर्दशनका समाचार प्रकाशन गरिरहँदा सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम गोरखापत्रमा शुक्रवारको जनसभाको तस्विर प्रकाशन हुन सकेन । यसको पछाडि समेत उनै किराँतीको दबाबले काम गरेको बताइएको छ । उक्त शक्ति प्रर्दशनको तस्विर प्रकाशन नगर्न /नगराउन किराँतीले ठाडो दबाब दिएपछि गोरखापत्रका सम्पादकहरुले हिजोको कार्यक्रमको तस्विर प्रकाशन नगरेको गोरखापत्र स्रोतले जनाएको छ ।
मिडिया कानुनका जानकारहरु यस्लाई ‘ सञ्चारमन्त्रीका सल्लाहकारको पदको दुरुपयोगको रुपमा टिप्पणी गरेका छन ।
मिडिया कानुनमा पिएचडी गरिरहेका अधिवक्ता स्वागत नेपालले किराँतीको यो व्यवहार प्रति कडा टिप्पणी गर्दै सल्लाहकारको योग्यतामाथि समेत प्रश्न चिन्ह उठाएका छन । उनले एसकाठमाडौंसँग भने ‘नेपालका कुनै पनि मन्त्रीका सल्लाहकार सल्लाहकार नभई ति झोले कार्यकर्ता मात्र हुन । खासमा,सल्लाहकार हुनका लागि जस्लाई सल्लाह दिने हो उ भन्दा जान्ने सुन्ने र पढे लेखेको हुनुपर्दछ ।’
नेपाल अगाडि भन्छन ‘राससले जे प्रकाशन गरेको थियो त्यो रासस आफैंले लेखेको नारा नभई, मिडियाले सूचनामात्र सम्प्रेषण गरेको हो । त्यो दिनको कार्यक्रम के हो त्यो कुन व्यानरमा थियो ? त्यो मुख्य कुरा हो ।
अगाडि प्रष्ट पार्दै नेपाल भन्छन,राससले गर्ने पत्रकारीता भनेको एजेन्सी जर्नालिज्म हो । एजेन्सी जर्नालिज्ममा व्यानरमा जे छ त्यस भित्र नारा के थियो भन्ने लेख्नै पर्ने हुन्छ । पाइभ डब्लु एच भनेको के हो ? सञ्चारमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारलाई कस्ले सिकाइदिने ?
पाइभ डब्लु एच भित्र नारा समावेश गर्ने पर्ने हुन्छ । सल्लाहकारको काम तिनका मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हो पत्रकारलाई होइन ।’
किराँतीले अनाधिकृत शक्तिको दुरुपयोग गरी पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कारण पत्रकार महासंघले तत्कालै अग्रसरता लिएर किँरातीमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरेका छन ।